Ndị ọkachamara na Semalt - Kedu ka a ga-esi ejide Google Scam Scams?
Otu ozi ọjọọ na-eme ebe niile, ebe ọ bụ na onye na-ezigara ya bụ onye ị maara, na-eziga gị ka ị pịa njikọ Google Doc. Ịpị njikọ ahụ ga-eme ka ị banye n'ụwa nke nsogbu. Ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya ihichapụ email.
Ryan Johnson, otu n'ime ndị ọkachamara na - ahụ maka Semalt Digital Services, na - eketakwa ahụmịhe banyere otu esi enwe nchedo na Google Docs scam.
Email ahụ emeghị site na onye ị chere na ọ si, ma kama nke ahụ, ọ bụ emelite phishing na ebumnuche nke ịghọ aghụghọ iji pịa njikọ. Ihe niile bụ gimmick maka iji gosipụta igodo gị Gmail na phisher. Ihe kacha njọ bụ nke John Podesta, Isi nke Kọmitii National Democratic, bụ onye nwere mkparịta ụka mkparịta ụka ya niile mgbe ọ dabara n'ime ọnyà.
Mgbe ọtụtụ ọdachi dakwasịrị, Google zara site n'ichebe nchebe ya iji chebe ndị ọrụ ya site na ozi-e na-ejikarị Google Docs. Ụlọ ọrụ ahụ nwere nkwarụ niile na-emejọ, wepụ akwụkwọ adịgboroja ma mee ka mmelite site na iji nlezianya nchọgharị. Google na-agba ndị ọrụ ume ịkọ ụdị ụdị ozi imelị na Gmail.
A na-eji ọtụtụ mgbochi iji kwụsị mgbasa nke mbido phishing, ọ bụ ezie na ndị na-awakpo ahụ ejiriwo mebie ọtụtụ nde adreesị email site na iche, Gmail account listings contact..
Ntuchi ndị ahụ na-eme ka ndị ọrụ akaụntụ Google ghọwanye ihe karịrị ọnwa ndị gara aga. Ndị na-agba ọsọ na-etinye dịka ndị kọntaktị n'ezie jisiri ike iziga akwụkwọ ọjọọ na myirịta na PDFs ziri ezi. Enwere uzo eji eme ihe iji chebe onwe gi n'ihe egwu ahu. Jide n'aka na i meela njirimara nchọpụta abụọ na akaụntụ Google gị niile. Ime otú ahụ na-enye aka ịkụ aka gburugburu ndị na-agba ọsọ n'ihi na ha agaghị enwe ike ịgafe nyocha nke koodu abụọ, nke ka ukwuu zitere site na ozi ederede. Gmail ga - achọpụta mgbe niile mgbe mmadụ na - agba mbọ ịnweta akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ị pịrị njikọ njikọ ọjọọ ahụ, ị ​​nwere ike ịga na nhazi ntọala akaụntụ Gmail gị ma wepu ngwa ngwa niile tinyere ngwa Google Docs adịgboroja.
Google nyere okwu ntinye maka nkwupụta. Ha kwuru banyere ihe ọmụma ha banyere nchekwa nke akaụntụ Google ma nye nkọwa zuru ezu mgbe nyochachara nke ọma. Ụlọ ọrụ ahụ ewerewo ihe iji chebe ndị ọrụ ha megide mgbasa ozi phishing email ndị na-abanye na Google Docs, nke metụtara ihe na-erughị pasent 0.1 nke profaịlụ Gmail ọrụ. Google nwere ike ịkwụsị agha ahụ n'ime otu awa. Naanị ozi kọntaktị nwere ike ịnweta na kpughere site na ojoro ahụ. Nnyocha a gosiri na ọ dịghị ihe ọmụma ọ bụla e mebiri. Ya mere a na - agba ndị ọrụ ume ka ha ghara ime ụdị ọ bụla ọzọ gbasara ihe ojoo ahụ. A na - agwa ndị ọrụ ka ha nyochaa ngwa ndị ọzọ site na ịga na Njikọ Nchedo Google.
Mgbakwụnye na ịpị njikọ ekwesịghị ịbụ akpaka ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ na-esite n'aka ndị mmadụ maara gị nke ọma. Ọ bụrụ na ịgaghị atụ anya ozi, wepụta oge iji nyochaa URL ahụ ma ọ bụrụ na o nwere ederede ederede ma ọ bụ nlele abụọ site n'aka ọkachamara site na ụzọ nkwupụta ndị ọzọ Source .